मलाई पश्चात्ताप छैन: बीपी - Himal Dainik
काठमाडौँ २४ भाद्र २०७७, बुधबार ०७:३०
प्रश्न: मैले तपाईंको राजनीतिक विचारधारा र जीवनप्रतिको धारणा अराजकतावादसँग त मेल खाँदैन भनेमा कत्तिको फरक पर्ला ?
बीपीः म एक अराजकतावादी हुँ । मानिस सधैं तनावग्रस्त हुन्छ । कस्तो तनाव भने अराजकताका आवेगहरुबीचको तनाव । मानिस नियमहरुबाट बाँधिन चाहन्न, आफ्नो लागि आफैं नयाँ मार्ग बनाउन खोज्दछ । तर समाजको सदस्य भएको नाताले सामाजिक मूल्य, मान्यता र यथार्थलाई पनि उसले मान्नैपर्ने हुन्छ ।
प्रश्न: भनाइको मतलब सीमित व्यक्तित्व र असीमित व्यक्तित्वबीच तनाव हुन्छ भन्न खोज्नुभएको हो कि ?
बीपीः यसलाई कुनै क्लबको एक सदस्य र व्यक्तिका बीचको तनावका रुपमा लिनुपर्ला । समाजको सदस्यको हैसियतमा तपाईंले केही मान्यता तथा कर्तव्यको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । साथसाथै तपाईं यसबाट छुट्कारा पाउनुपर्छ भन्ने सधैं सोच्नुहुन्छ । यस्तो तनाव ममा सधैं रहेको छ । तपाईंलाई याद होला, सातसालको क्रान्तिपछिको सरकारमा म गृहमन्त्री थिएँ र शक्तिसम्पन्न मन्त्री नै थिएँ । शान्तिसुरक्षाको स्थिति निकै अनिश्चित थियो । हाम्रा प्रहरीले बराबर बन्दुक प्रयोग गर्नुप-यो ।
प्रश्न: मलाई सम्झना छ । एक पटक म तपाईंकै निवासमा हुँदा तपाईं आफैंले बन्दुक चलाउनुपरेको थियो ।
बीपीः हो । मलाई अहिले पनि कस्तो लाग्छ भने कानून तोड्ने अधिकार जनतालाई छ । तर मेरो काम शासनव्यवस्था मिलाउनु हो र त्यसैले म राजनीतिमा छु । तपाईंले कानून उल्लंघन गरेमा मैले तपाईंलाई गोली हान्नु वा थुनामा राख्नुपर्ने हुन सक्छ । यसका साथसाथै कैदीप्रति मेरो सहानुभूति पनि रहन्छ ।
प्रश्न: कैदीहरुलाई जेल पठाउँदा पनि तिनीहरुमाथि तपाईंको सहानुभूति रहन्छ ?
बीपीः हो, रहन्छ किनभने उनीहरु तनावबीच बाँचेका हुन्छन् र जे गर्छन् गर्नुपर्ने ठानेरै गरेका हुन्छन् ।
प्रश्न: तपाईंको विवाह कहिले भएको हो ? के यो परम्परागत किसिमले भएको विवाह । थियो ? तपाईंका छोराछोरी कति छन् ? तपाईंको पहिलो बच्चा कहिले जन्म्यो ?
बीपीः मेरो विवाह १९३७ को फेब्रुअरी महिनामा बनारसमा भएको हो । मेरी पत्नी, भावी पत्नी, थियोसोफिकल स्कूलकी छात्रा थिइन् । त्यस बेला मैले भर्खर कानूनको उपाधि प्राप्त गरेको थिएँ । मेरा तीन छोरा र एक छोरी छन् । छोरी दुईटी थिए तर एउटीको सानैमा निधन भयो । जेठो छोरो प्रकाश, माहिलो श्रीहर्ष र कान्छाको नाम शशांक हो, छोरीको नाम चेतना हो ।
प्रश्न: प्रकाश कहिले जन्मेका हुन् ?
बीपीः अक्टोबर १९४७ मा ।
प्रश्न: तपाईंका ससुरा जीवितै हुनुहुन्छ ? उहाँको नाम के हो र उहाँ के गर्नुहुन्थ्यो ?
बीपीः उहाँको नाम कमलाप्रसाद उपाध्याय हो, उहाँ जीवितै हुनुहुन्छ । मेरो विवाह हुँदा उहाँ झापाका बडाहाकिम हुनुहुन्थ्यो । विवाह सम्पन्न हुनुअघि मैले उहाँकी छोरीलाई हेर्नैपर्छ भनेर उहाँले कर गर्नुभयो । यसरी मेरो विवाह अंशत परम्परागत शैलीअनुरुपको थियो भने केही हदसम्म त्यस्तो प्रकारको थिएन पनि । म उनलाई हेर्न बनारस गएँ । त्यतिबेला मैले सोचें, विवाह गर्न केटी खोज्ने यो तरीका अत्यन्त अशिष्ट थियो ।
उनलाई देख्नेबित्तिकै मैले विवाह गर्ने निर्णय गरें किनभने मैले उनलाई अस्वीकार गर्नुको मतलव अशिष्टता हुने थियो । मेराबारेमा मेरी आमाका उच्च आकांक्षा थिए र हरेक आमाले सोचेजस्तै उहाँ पनि आफ्नो छोरो एकदम असल र सुन्दर छ र उसले सर्वोत्तम दुलही पाउनुपर्छ भन्ने सोच्नुहुन्थ्यो । मेरी पत्नी सुशीला मेरी आमाले अपेक्षा गरेजस्ती सुन्दरी थिइनन् ।
प्रश्न: तर उहाँ त मैले हालसम्म देखेका आइमाईमध्येमा निकै राम्री देखिनुहुन्छ नि ?
बीपी: मैले पनि ठीक त्यस्तै विचार गरेको थिएँ तर मेरा मातापिता भने निराश नै हुनुभयो । (हाँसो) । अनि उनलाई हेरेपछि मैले मेरा भावी ससुरालाई १५ दिनभित्रै विवाह गर्नेछु भन्ने तार पठाएँ । उहाँ आश्चर्यचकित हुनुभयो । उहाँले आफु तुरुन्त काम छोडेर हिंड्न नसक्ने, बिदाका लागि निवेदन गर्नुपर्ने आदि आदि कुरा गर्नुभयो । मैले फेब्रुअरी ४ तारीखमा विवाह हुनैपर्छ नत्र विवाह नै गर्दिनँ भने । विवाह त भनेकै दिनमा सम्पन्न भयो तर अत्यन्त कम इष्टमित्रले मात्र भाग लिन सक्नुभयो । भेला एकदम सानो थियो । देवेन्द्र मेरा दुईजना भाइहरु र एउटी बहिनी मात्र विवाहमा आउन सके ।
प्रश्न: म तपाईंलाई १९४९ देखि चिन्दछु र मैले बाहिरबाट देख्ता तपाईं र तपाईंकी पत्नीबीचको सम्बन्ध अत्यन्त प्रेमपूर्ण र समझदारीपूर्ण भएजस्तो लाग्दछ । ल अब मलाई स्पष्ट शब्दमा भन्नोस्, के तपाईंले आफ्नी पत्नीलाई सधैं माया गर्नुभएको छ ? तपाईं उहाँप्रति सधैं इमान्दार रहनुभएको छ ?
बीपीः तपाईंको यस प्रश्नलाई म यसरी जवाफ दिन्छु: मलाई उनी आज पनि हाम्रो विवाह हुँदाका दिनको जस्तै आकर्षक लाग्छिन् । यसको आंशिक कारण चाहिं के भने हाम्रो वैवाहिक जीवनको अधिकांश समय मैले उनीबाट टाढा रहनुप-यो, म जेलमा हुन्थे वा भ्रमणमा वा निर्वासनमा. मैले उनीसँग पर्याप्त सामीप्य पाइनँ । त्यसैले उनीप्रतिको मेरो आकर्षण उत्तिकै छ । उनी मेरा लागि ठूलो निधि भएकी छिन् । उनीभित्र रहेको आध्यात्मिक गुणले मलाई आत्मबल प्रदान गरेको छ ।
वास्तवमा मैलेभन्दा उनले बढ्ता दुःख पाएकी छिन् । तपाईंले बाहिरी रुपमा मात्र हेर्नुभएमा नै यो देख्न सक्नुहुन्छ । १९६० को डिसेम्बरमा समातिंदा मलाई कहाँ थुनिएको थियो भन्ने कसैलाई थाहा थिएन । मेरो अवस्थाबारे अर्थात् म मारिएँ कि जीवितै छु भन्ने समेत कसैलाई थाहा थिएन । एक वर्ष जतिपछि मैले उनलाई देख्ता उनको कपाल फुल्न सुरु गरेको पाएँ र त्यसपछिका तीन वर्षमा उनको कपाल प्रायः सेताम्य भइसकेको थियो र अनुहारमा चाउरी पर्न थालिसकेको थियो ।
म पक्राउ परेको कारणले मात्र होइन, हाम्रा सानै उमेरका सबै केटाकेटीको हेरचाह गर्नुपर्ने अभिभारा समेतले गर्दा उनी छिटो बूढी भएकी थिइन् । उनी अत्यन्त साहसी छिन् । इमान्दारिताकै कुरा गर्ने हो भने यो इमान्दारी के हो म जान्दिनँ । तपाईंको प्रश्नको आशय परम्परागत हिसाबको हो र अरु कसैसँग मेरो बसउठ भयो कि ? भन्ने हो भने, मेरो अनुभवमा आफ्नै पत्नीसँगको संसर्गबाहेक अरुसँग बसउठ नै नभएका मानिस अत्यन्त कम मात्र भेटिनेछन् । म पनि एक सामान्य मानिस भएको हुँदा मेरो पनि बसउठ भएको छ । तर मेरो जीवनको स्थायी र बलियो लगाव भने उनीसँगै छ।
प्रश्न: तपाईं कहिल्यै राजनीतिबाट थकित हुनुभएको छ ? तपाईंले राजनीतिमा लागेर सङ्घर्ष, यातना, जेल, निर्वासन आटिका अन्त्यहीन चक्रमा फसी जिन्दगीको ठूलो अंश बिताउनुपरेकाले राजनीति छोडको भए पनि कुनै पश्चात्ताप हुने थिएन भन्ने विचार कहिल्यै मनमा आएको छ कि ?
बीपीः सुन्नोस् कुरा के छ भने तपाईंले भन्नुभएको जस्तो दुःख, कष्ट भोग्नुनपरेको भए म अहिले जे छु त्यो नै हुने थिइनँ ।
प्रश्न: तर तपाईंको हकमा त पूरा जीवन नै त्यस्तै दुखकष्टको वृत्तान्तजस्तो भएको छ नि ?
बीपीः मैले भोगेको जीवन त्यही हो, त्यसबाहेकको अर्को जीवनबारे मलाई अनुभव छैन । त्यसमाथि पनि मानिसहरुले सामान्य रुपमा जिउने जीवनप्रति मलाई आकर्षण छैन । त्यस किसिमको जीवन बाँच्न बाध्य हुनुपरेको भए म दिक्क भएर भुतुक्क भइसक्थे । मलाई के लाग्छ भने अर्को नयाँ जीवन नै दिइए पनि मेरो सो नयाँ जीवन मैले अहिले बिताएको जीवनभन्दा खासै किसिमले भिन्न हुँदैनथ्यो । मेरो विचारमा तपाईंको प्रश्नका दुई पक्ष छन् । एउटा के हो भने एक राजनीतिज्ञको नाताले म अवश्य सफल हुन चाहन्थे ।
मैले निर्माण गर्न खोजेजस्तो समाज र मैले सृजना गर्न चाहेजस्तो आर्थिक प्रणाली, अर्थात् म आफैंलाईभन्दा अरुलाई बढी प्रभाव पर्ने कुराहरुमा सफलता प्राप्त नभएकोमा म चिन्तित छु । व्यक्तिगत हिसाबले मेरो आफ्नो हकमा सफलता वा असफलताले खास फरक पार्दैन । मलाई कस्तो लाग्छ भने आफ्नो अन्तस्करणमा सकेसम्म राम्रो प्रयास गरेको छु भन्ने तपाईंलाई लाग्छ र आफ्नो सम्पूर्ण क्षमता लगाउनुभएको पनि छ भने तपाईंलाई अवश्य सन्तोष मिल्दछ । सफलतालाई शाब्दिक अर्थमा लिने हो भने म सफल भएको छैन तर जब म मानिसहरुले सस्तो सफलता प्राप्त गरेको देख्दछु, मलाई लाग्दछ, तिनीहरुले कुनै भित्री सन्तोष पाउँदैनन् । तपाईं आपूm कर्तव्यरत हुनुहुन्छ भने असफलै भए पनि भित्री हिसाबले तपाईंलाई बढी सन्तोष मिल्नेछ । म आफुले त्यसै गरेजस्तो लाग्दछ ।
प्रश्न: यसको अर्थ जीवनप्रतिको तपाईंको धारणामा आध्यात्मिक अंश पनि छ भन्न सकिन्छ ?
बीपीः हो, बिलकूल सकिन्छ । म स्वास्थ्योपचारको सिलसिलामा अमेरिका जाँदा एक जना अमेरिकी विद्वान्ले ठीक त्यही प्रश्न सोधेका थिए । नेपाल फर्केमा पक्राउ परिन्छ भनेर स्वदेश नफर्कन सल्लाह दिनमध्ये उनी पनि एक थिए । मैले उनलाई के जवाफ दिएँ भने म नफर्केको भए अझ बढी दुःखी हुने थिएँ, म आफैंलाई धिक्कार्ने थिएँ ।
हाम्रो सन्दर्भमा नेपालको राजनीति राष्ट्रपति या मेयर या यस्तै अरु पदमा निर्वाचित हुने बाटो होइन । यस्ता निर्वाचनको सम्बन्ध जीवनका केही मूल्यहरुको स्थापना गर्न तथा मानव रुपमा बाँच्न चाहने इच्छासँग रहेको हुन्छ । हामी आधारभूत मूल्यहरुका लागि सङ्घर्षरत छौं । मेरो विचारमा नेपालमा मात्र होइन, अन्य मुलुकहरुमापनि हामी मनुष्य झैं नै बाँच्न चाहन्छौं । अत तपाईंको सङ्घर्षमा आध्यात्मिकताको अंश नभएमा तपाईं बाँच्न सक्नुहुन्न ।
दोस्रो कुरा, तपाईं बाँच्नु नै भयो भने पनि समाजमा त्यस्तो उपयुक्त प्रभाव पार्न सक्नुहुन्न, त्यसका मूल्यहरु स्थापना र सृजना गर्न सक्नुहुन्न र तपाईं प्रजातन्त्र जस्ता मूल्यहरुको सृजना गर्ने सक्नुहुन्न । हाम्रा जनतालाई प्रजातन्त्र भनेको के हो थाहै छैन तर हामी प्रजातान्त्रिक मूल्य स्थापना गर्न चाहन्छौं । मलाई लाग्छ, हाम्रो देशको राजनीतिको आधारभूत स्वरुप राजनीतिकभन्दा बढी आध्यात्मिक छ ।
प्रश्न: नेपाल र भारत दुवैमा गरी तपाईंले कति वर्ष जेलमा बिताउनुभएको छ ?
बीपी: भारतमा चार वर्षभन्दा अलि बढी र नेपालमा ११ वर्षजति जेलमा बिताएको छु र १९ वर्षजति निर्वासनमा । अर्थात् कुल १५ वर्ष जेलमा र १९ वर्ष निर्वासनमा ।
प्रश्न: आफ्नो स्वास्थ्यको अनिश्चितताबारे थाहा पाएकोले तपाईंलाई मृत्युसँग डर लाग्दैन ? तपाईं कति वर्षदेखि क्यान्सरबाट पीडित हुनुहुन्छ ? सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, क्यान्सर शब्दले जसलाई पनि त्रस्त पार्दछ र क्यान्सर रोग लागेको मानिस निराश हुन्छ । तपाईंले कहिल्यै त्यसरी हरेश खानुभएको छ कि ?
बीपीः अहँ, मलाई मृत्युदेखि डर लाग्दैन । तर मृत्युबारे मलाई विचार आइरहन्छ । मलाई आपूmले गर्नुपर्ने जति कार्य पूरा नभएजस्तो लाग्दछ । मैले व्यवस्थित जीवन बिताएको भए जीवनका हरेक क्षेत्र: साहित्य, राजनीति आदिमा हरकिसिमले अझ बढी योगदान गर्न सक्ने थिएँ किनभने ती सबैका लागि मसँग पर्याप्त क्षमता छ । तर म एकदमै अव्यवस्थित छु, तपाईंलाई थाहै छ, पूर्णतः अव्यवस्थित । हुनत व्यर्थैं बकबक गरेजस्तो पनि लाग्ला तर म के भन्ठान्छु भने व्यवस्थित हुन सकेको भए म सामान्य अर्थमा एक महान व्यक्तित्व हुने थिएँ । मेरा विचारहरु र मेरो राजनीतिक दर्शन अझ बढी सुस्पष्ट र प्रबल शैलीमा व्यक्त गर्दै मैले अरु बढी लेखहरु र पुस्तकहरु तयार गर्न सक्थे । अथवा मैले नेपालमा प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई मजबूत गर्न अझ बढी योगदान पु-याउन सक्थें ।
यस प्रसङ्गमा मलाई मृत्युबारेको विचार अक्सर आइरहन्छ । मेरो दैनिकीमा मृत्युबारेका प्रसङ्गहरु प्रशस्त छन्, शायद अब म धेरै बाँच्दिनँ र नै म जानाजानी आफुलाई व्यवस्थित बनाइरहेको छैनँ । कहिलेकाहीं मलाई योगीकहाँ जानुपर्छ कि जस्तो लाग्छ किनभने भनिन्छ योगले मानिसको मानसिक र शारीरिक दुवै कार्यशैलीमा अनुशासनको अभिवृद्धि गर्दछ । म धेरै बाँच्दिनँ कि भन्ने भावना बराबर आइरहन्छ तर मृत्युले मलाई आतङ्कित बनाउने भन्ने चाहिं सबालै छैन ।
प्रश्न: क्यान्सरबारे नि ?
बीपी: म हजारीबाग जेलमा हुँदा अर्थात् १९४३ र १९४५ को बीचमा मलाई क्यान्सरले समातेको हो । १९४४ मा जेलमै छँदा मेरो शल्यक्रिया गरियो । यसका लागि मलाई हजारीबागबाट राँची लगिएको थियो । डाक्टरहरुका विचारमा मेरो व्यथा टन्सिलाइटिस थियो किनभने मेरो घाँटीमा एक गाँठो देखिएको थियो । १९४५ मा जेलमुक्त भएपछि मलाई रक्तस्राव हुन थाल्यो र राजेन्द्रप्रसादले मलाई बम्बई पठाउनुभयो (अक्टोबर १९४६ मा) । उहाँले त्यहाँका एक प्रतिष्ठित डाक्टरलाई चिठी लेखिदिनुभयो । ती डाक्टरले मलाई टाटा क्यान्सर इन्स्टिच्यूट जान सिफारिश गरे, सो इन्स्टिच्यूटका निर्देशक सर ए डंकन थिए ।
मेरो बायोप्सी (रोगनिदानका लागि गरिने मासुको परीक्षण–अनु.) गरियो र तीनचार दिनमा रिपोर्ट प्राप्त भयो । रिपोर्ट सोझै राजेन्द्रप्रसादकहाँ पठाइएको थियो । उहाँले त्यो रिपोर्ट मलाई दिनुभयो, त्यो शिलबन्दी गरिएको थियो किनभने रोगीले सो व्यहोरा थाहा पाएमा डरले आत्तिएर मर्छ भन्ने डाक्टरहरुको विचार थियो । त्यसैले सो सील मैले खोल्न नहुने खास निर्देशन नै थियो ।
राजेन्द्रप्रसाद खूब चिन्तित देखिनुभयो, म सहजै त्यस्तो देख्न सक्थें । उहाँले भन्नुभयो, चिन्ता नगर्नोस् । यो रोग निको हुन सक्छ र तपाईंको राम्रो हेरचाह भइरहेको छ । भोलिपल्ट म अस्पताल गएँ र मेरो उपचार सुरु भयो । डाक्टरहरुले देवेन्द्र र मेरी पत्नीलाई म तीन वर्षभन्दा बढी नबाँच्ने कुरा बताइसकेका थिए ।
तर मेरो शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली क्रमशः राम्रो हुँदै आयो । उपचार समाप्त भएपछि डाक्टरहरुले मलाई एक महिनापछि फेरि आउन भने । म बम्बईमा छ महिना बसें । डाक्टरहरुका अनुसार मेरो रोग पूरै निको भएको थियो । यो निको हुनु ठूलो आश्चर्य थियो किनभने रोग दोस्रो चरणमा पुगिसकेपछि मात्र पत्ता लागेको थियो ।
अहिले न्यूयोर्क तथा अन्य स्थानका डाक्टरहरु मलाई क्यान्सर भएकै थिएन भन्ठान्छन्, उनीहरुको विचारमा ट्यूमर वा त्यस्तै केही मात्र भएको थियो किनभने मलाई त्यस किसिमको क्यान्सर भएको भए निको हुने सम्भावना अत्यन्त कम थियो ।
प्रश्न: तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? कहिल्यै निराश हुनुभएन ?
बीपीः अहँ, पटक्कै भइनँ । हरेक दिन मैले अस्पताल जानुप-यो, म बहिरंग बिरामी थिएँ र उपचारले मलाई एकदम कमजोर गरायो । म बम्बईबाट ३० माइल पर बस्थें । उपचारका लागि अस्पताल जान हरेक दिन मैले लोकल रेल समाती परेल स्टेशन पुग्नुपथ्र्यो र त्यसै गरी फर्कनुपथ्र्यो । मेरो हेरचाह गर्न सुशीला आएकी थिइन् ।
मलाई लाग्थ्यो म थकित र चिन्तित देखिएमा सुशीला एकदम दुःखी होलिन् । म उनलाई आफुसँगै बम्बई आउन भन्थे, समुद्रकिनारमा घुमाउन लैजाने पनि गर्दथें । जब म अस्पताल पुग्थे डाक्टरहरु एकदम खुशी हुन्थे । उनीहरुको भनाइमा मेरो उपस्थितिले अरु रोगीहरुलाई पनि आनन्दित पार्दथ्यो ।
प्रश्न: आत्महत्या र इच्छित मरण (यूथानेसिया)–बारे तपाईंको के धारणा छ ?
बीपीः मान्छेलाई खासगरी आफ्नै लागि वा आफ्नो परिवारका लागि बोझ भएको अवस्थामा, आत्महत्या गर्ने अधिकार छ । म आत्महत्यालाई समर्थन गर्दछु तर केवल कुण्ठाका कारण गरिएको आत्महत्यालाई भने म समर्थन गर्दिनँ ।त्यस्तै इच्छित मरणको म समर्थक रहेको छु । निको नहुने स्थितिमा पुगेको क्यान्सर वा यस्तै उपचार सम्भव नभएका अन्य रोगबाट ग्रस्त मानिसले इच्छित मरण रोज्न पाउनु उसको अधिकार हो । वास्तवमा मैले मेरा आफन्तहरुलाई मलाई पक्षाघात हुने गरी बेहोशी (Stroke) भएमा वा अन्तिम अवस्थाको क्यान्सर भएमा मलाई अनन्त निद्रामा पु-याउने खालको सुई दिनू भनिसकेको छु ।
प्रश्न: यस कुरामा म तपाईंसँग पूर्णसहमत छु र मैले आत्महत्या र मृत्युदान दुवैका बारेमा लेखेको पनि छु ।
बीपीः यसले मलाई मिनु मसानीले केही समयअघि इच्छित मरणका लागि समर्थन जुटाउन खडा गरेको संस्थाको याद दिलायो । म यसको प्रशंसक छु ।
प्रश्न: तपाईं आफुलाई इतिहासले कसरी सम्झोस् भन्ने चाहनुहुन्छ ? अर्थात् तपाईं आफ्नो स्मृति कुन रुपमा चाहनुहुन्छ ?
बीपीः मैले यसबारे सोचेको छैन । वास्तवमा मैले पछि आउने पुस्ताले सम्झनुपर्ने खालको त्यस्तो केही गरेको छु जस्तो नै लाग्दैन । मैले मेरा यसअघिका अन्तर्वार्ताहरुमा तपाईंलाई भनिसकेको छु, मेरो कामको आध्यात्मिक पक्षले मलाई इतिहासमा स्थान मिल्नुपर्छ भन्ने माग राख्लैन । मैले जिन्दगीको आनन्द लिएको छु र मलाई लाग्छ, मैले मेरा कर्तव्य पूरा गरेको छु, बस् यत्ति हो । मेरो स्मारक बनाई दुनियाँले मेरो सम्झना गर्नुपर्छ भनूँ भने मेरो त्यस्तो महङ्खवाकांक्षा छैन, त्यस किसिमको महङ्खवाकांक्षा पटक्कै छैन । नेपालमा प्रजातान्त्रिक पद्धतिको थालनी गर्ने व्यक्तिको रुपमा म चिनिनुपर्छ भनूँ भने त्यो पनि एउटा एकदमै अस्पष्ट स्मारिका हुनेछ । त्यसैले मलाई यस देशले, यहाँका जनताले कसरी सम्झना गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा म त्यत्ति चिन्तित छैन ।
प्रश्न: त्यसो भए तपाईं आफु आफैंमा इमान्दार भएको ठान्नुहुन्छ? आफुले गर्न चाहेको कुरा सम्पन्न गर्न सक्तो प्रयास गर्नुभएको छ त ?
बीपी: हो, आफू अव्यवस्थित हुनुबाहेक अरु कुरा मैले आफुले सकेसम्म गरें । म बढी व्यवस्थित भएको भए शायद मेरो योगदान अझ बढी स्थायी र टिकाउ हुँदो हो ।
प्रश्न: अनि तपाईं आफुप्रति इमान्दार हुनुभएको छ त ?
बीपीः हो, म आफुप्रति पनि एकदम इमान्दार भएको छु । यसमा कुनै शंकै छैन । वास्तवमा म आफैंसँग धेरै इमान्दार भएको छु ।
प्रश्न: बीपी, आफ्नो अतीत सम्मँदा तपाईंलाई कुनै पश्चात्ताप लाग्छ ?
बीपीः मलाई कुनै पश्चात्ताप छैन । मैले सनसनीपूर्ण, अत्यन्त रोचक, सन्तोषप्रद र पूर्णजीवन बिताएको छु । मलाई पुनः नयाँ जीवन सुरु गर्न दिइयो भने पनि मैले अपनाउने बाटो र मेरो सोचाई अहिलेको भन्दा फरक हुने छैन । जहाँसम्म मेरो जीवनको प्रश्न छ– दुःख, कष्ट, उत्पीडन र अत्याचारको वातावरणमा म जसरी बाँचें र म जेजस्तो भएँ मेरो जीवन त्यसभन्दा फरक खालको हुनसक्ने अवस्था पनि थिएन ।
यिनै जीवन्त तथ्यहरुको अन्तर्कियाको एक श्रृंखला नै मेरो जीवन हो । सांसारिक अर्थमा अर्थात् दुनियाँको आँखाले हेर्दा मैले जीवनमा धेरै दुख, कष्ट पार गरेको छु, मेरो जीवन नै अभाव, भोक र कहिलेकाही त सिकिस्त बिरामी हुँदा पनि अमानवीय किसिमको जेलयातना समेतको एक कहानी भएको छ । तर भोला, मलाई भने दुख पाएजस्तो लाग्दैन । अन्य कुनै पनि प्रकारको जीवन पट्यारलाग्दो मात्र नभई नीरस समेत हुने थियो । त्यसमाथि मैले मेरा देशवासी, मेरा साथीहरु र परिवारबाट पाएका असीम प्यार, ममता र सम्मान देवताहरुलाई चढाइने भेटी जत्तिकै अमूल्य छन् ।
(भोला चटर्जी, वीपी कोइराला एक क्रान्तिकारी व्यक्तित्वबाट साभार गरिएको)
अघिल्लोगण्डकी प्रदेशका १४६ प्रहरीमा कोरोना, ६० निको भए
पछिल्लोरोनाल्डोको कीर्तिमानी सय गोलमा पोर्चुगलको जित